टिकाटालो त भयो, बिहेको सपना अधुरै रह्यो : इन्जिनियर सतीशको २५ वर्षको उमेरमै दुखद अन्त्य – Enepali News
टिकाटालो त भयो, बिहेको सपना अधुरै रह्यो : इन्जिनियर सतीशको २५ वर्षको उमेरमै दुखद अन्त्य
July 17, 2020 173
काठमाडौं । मेलम्चीको भेलमा वगेर ज्यान गुमाएका सतीशको परिवार अहिले शो’कमा डुवेको छ । परिवारका सदस्यलाई त्यो सत्य विश्वास गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । छोराको भविष्यका लागि आमा बुवाले जिवनमा निकै धेरै संघर्ष गरेका थिए । उनकै भविष्यका लागि आफने दुख विर्सेका थिए । तर इन्जिनियर बनिसकेको जवान छोरालाई अचानक गुमाउनु पर्दा ‘आमा मञ्जु अर्धचेत अवस्थामा छन् । उनको गला सुकेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ४ कदमचोकका स्थानीय बासीन्दा सतीशको घरमा यतिबेला शो’क छाएको छ । छोराको शोकमा डुबेका बुबा अमरकिशोर गोइतको सपना हराएको छ । ७४ वर्षे हजुरबुबा कृष्णवीरको अवस्था नाजुक भएको छ । २५ वर्षको कलिलो उमेरमा निधन भएका सतिशको विवाह समेत निश्चित भइसकेको थियो । छोराको विवाह गरेर वुहारी ल्याउने आमाबुवाको सपना भत्किएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरङ परीक्षणका क्रममा गएको मंगलबार दिउँसो सुरुङको १७ नम्बर गेट फु’ट्दा २५ वर्षीय सतीश गोइतसहित दुईजना हराएका थिए । उनीसंगै गाडी चालक राधाकृष्ण थापा समेत हराएका हुन् । तर इन्जिनियर गोइतको शव फेला परेको थियो भने चालक अझै हराइरहेका छन् ।
सतीशको शवलाई जनकपुर ल्याएर बिहीबार जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। सतीशले सोमबार बिहान घरपरिवारका सदस्यहरुसंग एकघण्टा लामो कुराकानी गरेका थिए। उनले कुराकानीका क्रममा पनि आमावुवा र परिवारका सदस्यको चिन्ता गरेका थिए । तपाइँहरुलाई केहि समस्या भए मलाई तुरन्त फोन गर्नुहोला भन्दै फोन राखेका छोराको अचानक निधनको खबरले परिवार शोकमा डुवेको छ ।
२५ वर्षका सतीशको विवाह हुने निश्चित भएको थियो । गएको वैशाखमा उनको टिकाटालो पनि भइसकेको थियो । उनको सप्तरीकै एक युवतीका साथ विवाहको टिकाटालो भएको हो । विवाह मंसिरमा गर्ने तयारी समेत भएको थियो ।
घरको ठूलो जिम्मेबारी बोक्नै लागेका सतीशको निधनले आफन्तलाई ठूलो पी’डा भएको छ। चार छोराछोरी मध्येका काइँला थिए सतीश। दुई दाजुभाइमध्ये उनी कान्छो। दाइ आतिश प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीका सवारीचालक छन्। दुई दिदी बहिनीको विवाह भइसकेको छ।
२५वर्षको कलिलै उमेरमा दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका गोइतका आफन्त र साथी उनको निधनले म’र्मा’हत भएका छन् । उनी जिवनप्रति निकै आशावादी सोच राख्ने इन्जिनियर थिए । उनका साथीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निधन प्रति दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
दिप किरण खड्काले ट्वीटरमा लेखेका छन् । सतिष गोइत जो मेलम्ची आयोजनामा इञ्जिनियर भएर काम गर्दै थिए, आयोजनाको बाँधमा आएको समस्याले बे’पत्’ता भए। संघर्षको किताब लेख्न जन्मेको हुँं, देह त्यागको कथा लेख्न होइनु भन्नेको हाल नै हृ’दय’वि’दारक बनाईदियो ३० वर्षमा रजाइ गर्ने दलालहरु, र तिनको घानमा निर्दोषहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने ?
Nextनेपालमा विपत : लकडाउनकै अवधिमा कूल १ सय ५५ को मृत्यु, ५२ बेपत्ता
हिलाम्ये ट्रयाक्टरमा सुरक्षाकर्मीसहित मुख्यमन्त्री उभिएको फोटो भाइरल, गुरूङ भन्छन्- के नौलो कुरो भयो र!
सरिता गिरी समाजवादी पार्टीबाट निस्कासित, सांसद पद गयो
शुक्रबार २ सय २४ जनामा कोरोना पोजेटिभ